Nezvedu - Cangzhou Xinxiang International Trade Co, Ltd.
Cangzhou Xinxiang International Trade Co, Ltd. inoshandira zvinhu zvemitambo, bhizimusi rekugadzira iro rinosanganisa R&D, kugadzira uye kutengesa. Yakatungamirwa muguta reCangzhou, Hebei Province, nzvimbo inowanikwa muChuma Yekutanga Circle uko kune nzira yekufambisa, inoshanda, yakanaka uye yakazara yekufambisa inowanikwa, kambani yedu inongova maawa maviri kubva kuna Tianjin Xingang chiteshi chikuru kune yakazara .
Kubva pakagadzwa muna1996, kambani yedu yave ichivandudzwa kwemakore anopfuura makumi maviri. Makambani edu maviri anobatsira, kurevaCangzhou Xinyu Sports Goods Co., Ltd. uye Cangzhou Shengyu Sports Goods Co., Ltd. Tiri kutarisa paR & D uye kugadzirwa kwemabhora akagadzirwa nerabha, PVC, PU uye zvimwe zvinhu, zvinosanganisira nhabvu, basketball uye volleyball, nezvimwewo.
Kusimudzira uzivi hwe "kungwarira mashandiro uye kutendeseka sevhisi", kambani yedu yakanangana nemusika uye yakanangana nevatengi. Nekuda kwenzwi redu rekutengesa zvine mutsindo, hunoshamisa chigadzirwa mhando uye nekukurumidza uye inoshanda sevhisi modhi, isu takawana yakanaka musika mukurumbira.
Mumakore achangopfuura, kambani yedu yave proactively kuwedzera pamusika mhiri kwemakungwa. Nezvese zvigadzirwa zvedu zvapfuura kuongororwa kweEn 71 uye chitupa cheEC, zvakaendeswa kune misika yakawanda nzvimbo dzakadai seEurope, North America, South America, Southeast Asia, Middle East, West Africa, South Africa uye North Africa. Gore rega rega, akasiyana marudzi ebhora anotumirwa anopfuura mamirioni gumi, achiwana kuzivikanwa kubva kune vatengi vepasirese.
Kuenderera mberi nemweya weumhizha unoratidzwa ne "kutevera kunaka uye kupayona mumunda", Cangzhou Xinxiang International Trade Company Limited ine chokwadi chekupa zvigadzirwa zviri nani uye nemhando yepamusoro masevhisi eChina nevekunze vanyore pamwe nekufambira mberi pamwe nenyika.